Malunga nathi - iFujian Golden Bamboo Industry Co., Ltd
yasekwa ngo-2011 kwaye ithatha indawo ye-133,400 yeemitha zesikwere. Umzi-mveliso ubekwe kwidolophu yaseNanjing, kwisixeko saseZhangzhou, kwiphondo laseFujian apho iyeyona ndawo ilungileyo yokukhula koqalo. Yimveliso entsha yoqalo kunye nenkampani yokusebenza yanamhlanje enomsebenzi "wokukhuthaza inkqubo yokhuselo lokusingqongileyo kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwezixhobo zendalo".
Abayili abaphambili abali-11
I-REBO (iFujian Golden Bamboo Industry Co., Ltd) ikhethekileyo kwi-R & D, kwimveliso, kunye nasekuthengiseni i-strand ephothiweyo yokwakha u-bamboo, i-flooring, i-wall cladding, i-horse plank, i-beam, i-joist, ucingo, njalo njalo.
Iimveliso zifumene phantse Amalungelo awodwa omenzi wechiza ali-100 esizwe kunye namalungelo awodwa omenzi wechiza, kwaye anokuqina kweKlasi 1, Sebenzisa iklasi yesi-4, impendulo yoMlilo i-Bfl-s1, iFormaldehyde Emission E1 esemgangathweniUkuvunywa kokutyibilika, kwaye kusetyenziswa ngokubanzi kwigadi, ipaki, ihotele, isikolo, ikhaya neofisi, isakhiwo seprojekthi, njl.
I-REBO izinikele ekusebenzeni kweplani yoqalo kunye nokuphuculwa, ijolise kuluhlaza, ifilosofi enobubele kunye nempilo. Ngenxa yedurabiIity ephezulu, ukhuseleko kunye nezinye iipropathi ezibonakalayo, umsonto olukiweyo womthi luphawu olugqwesileyo nolungokwemvelo lweWPC kunye neenkuni zemveli ezichasene nokubola